Iyo New Djibouti Sheraton iri kukwikwidzana neKempinski neAtlantic semahotera epamusoro
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Djibouti Breaking Nhau » Iyo New Djibouti Sheraton iri kukwikwidzana neKempinski neAtlantic semahotera epamusoro
African Tourism Bhodhi • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Djibouti Breaking Nhau • Hospitality Industry • Hotera & Resorts • Investments • Kuvakazve • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau
Vashanyi kuJibouti vanogona kudzoka kunzira yemugwagwa wekare kwazvo mukutengeserana kwemunyu vachifamba pamwe chete nengamera dzakatakura "goridhe jena", uye kukwira neWhale Shark, imwe yenzvimbo chete pasi pano munhu anogona kumuka padhuze nehukama nezvisikwa izvi. . Vashanyi vanogona kushanyira yakasvibira yakasvibira Lac Assal, ingori maminetsi makumi matatu kubva kuSheraton Djibouti, iro girini yemvura yakasvibira inokwezva geologists uye volcanologist kubva pasirese pasirese.
Kempinski, Atlantic uye ikozvino Sheraton Djibouti vari kukwikwidza vaenzi pane zvinoshamisa Djibouti Mahombekombe.
Nhasi Sheraton yazivisa kuvhurwa mushure memiriyoni yemadhora ekudyara kwehotera yayo ine makamuri zana nemakumi masere neshanu seIhotera yekutanga muAfrica pasi peiyi Marriott Brand
Idzo nzvimbo dzakafungidzirwa dzinovavarira kuumba nharaunda umo vashanyi vanogona kunzwa vakasununguka uye kugadzikana, kungave kuri kushanda, kusangana, kana kutandara.
Kudhirowa pamidzi yayo senzvimbo yemunharaunda yevagari vemo uye vashanyi munzvimbo dzinomira nyika pasirese, nzira nyowani yeSheraton inogadzira ruzivo rwakakwana uye rwakakwana nenzvimbo dzekubatanidza, kubereka, uye kunzwa chikamu chechimwe chinhu.
Inowanikwa paPlateau du Serpent muDhipatimendi reDhipatimendi rekare, hotera iri mukati memakiromita ekufamba kubva kudhorobha reJibouti uye maminetsi gumi kubva Djibouti Ambouli International Airport. Iyo inoratidzira Sheraton Djibouti yaive yekutanga hotera yepasi rese kuvhura muguta guru, ichibatanidza hupfumi hwenyika yeJiboutian nemitemo yepasirese yekugamuchira vaeni. Ihotera iyi yaizivikanwa neRepublic of Djibouti mugore rayo rekutanga rekuvhura uye yaitaridzwa pasitampu yemasevhisi egore. Chinzvimbo chakakosha munharaunda yemuno, Sheraton Djibouti inobata ndangariro dzakasarudzika kune vazhinji veDhiibout avo vakafarikanya kushanya kunoyevedza, kuungana kwemhuri, uye mhemberero dzetsika pahotera.
Pamwoyo peSheraton Djibouti panochengeterwa vanhu panodadisa chakajeka chekristaro mwenje inoratidza mepu yeJibouti. Nzvimbo yekutandarira yakafungidzirwa se "Ruzhinji Ruzhinji" rwehotera; nzvimbo yakazara, yakavhurika iyo inokoka vanhu kuti vave pamwe chete kana kutora nguva yekuva vega pakati pevamwe, kugadzira pfungwa yesimba nekuva vevamwe. Nekuyerera kuri kwomuzvarirwo, kujeka, uye kusinganetsi, vashanyi vane zvavanoda mukati mesviro yeruoko, zvese zvakagadzirirwa kupesana neshure rekukoka iro rinonzwa kudziya uye kugadzikana asi rakanatswa.
Sheraton Djibouti inoratidzira akawanda masiginecha echiratidzo chitsva chaSheraton. Izvi zvinosanganisira iyo Nharaunda Tafura, inokoka, chinangwa-chakavakirwa nzvimbo yekushandira iyo inosungira hotera yekutandarira uye inobvumira vashanyi kuti vashande, vadye, uye vanwe pavanenge vachiwedzera simba renzvimbo. Ichitevera huzivi hwaSheraton hwekugamuchira zvese fomu uye mashandiro, matafura aya itsika yakagadzirirwa nezvigadzirwa zvekuchengetedza vashanyi zvine zvibereko zvinosanganisira kuvakira-mukati mwenje nemagetsi emagetsi.
Iyo Studios inoshanduka kuunganidza nzvimbo inowanikwa kubhuka chero nguva muenzi paanoda iyo, zvichiita kuti vashande pamwe chete, kubatanidza uye kushamwaridzana mune zvisina kujairika mamiriro. Yakavakwa pamapuratifomu akasimudzwa uye akapoteredzwa negirazi, iyo tech-inogoneswa maStudios anotendera vashanyi kuti vape kune simba renzvimbo yeruzhinji pamwe nekupa zvakavanzika uye kutarisa kumisangano yeboka diki kana zviitiko zvakavanzika zvekudyira.
Chikafu chitsva chakakwidziridzwa uye chinwiwa cheSheraton Djibouti chinogadzira nzvimbo yekutarisisa. Chikamu chebhawa, chikamu chekofi imba uye chikamu musika, iyo Kofi Bhawa iyo mbiru yepakati pechiratidzo chitsva cheSheraton, inoshandura vashanyi zvisina musono kubva masikati kusvika manheru nesarudzo dzekudyira dzinowanikwa munzvimbo ino, zviri nyore kudya panguva yekushanda uye inogadzirirwa kugadzirisa zvese zvinonaka uye marongero enguva.
GUESTROOMS & CLUB LOUNGES IYO CHAMPION BUDIRO
Mumakamuri evaeni, ayo ari kuitwa zvishoma nezvishoma kugadzirisa, vashanyi vanogamuchirwa munzvimbo inopenya, ine mwenje ine kudziya, kwekugara kwekugara. Minyoro yekupedzisa uye yakapfava matoni ehuni anowedzeredzwa nebhuruu uye turquoise matauriro akafuridzirwa negungwa reJibouti, nepo madziro akashongedzwa nemifananidzo yakafemerwa munharaunda. Makamuri akapararira uye emazuva ano evaenzi akafungidzirwa nezvishandiso zvitsva zvekugadzira, senge majaja eUSB uye mapanhau enhau. Vashanyi vanogona kunakidzwa nechero nyaradzo inotarisirwa kubva kuSheraton kugara kusanganisira iyo Sheraton Sleep Experience pamubhedha wepuratifomu uye yemazuva ano yekufamba-mune mashawa.
Iyo yakashandurwa Sheraton Club Lounge inzvimbo yakasarudzika ye Marriott Bonvoy Nhengo dzeElite uye Sheraton Club nhanho yevashanyi, uye inopa mamiriro ekugashira uye akakwirira anoshanduka zvisina mushe nezviitiko kubva mangwanani kusvika manheru. Vashanyi vanowana zvakagadziridzwa zvekudya uye zvinwiwa zvinopihwa, zvigadzirwa zveprimiyamu, kuwedzerwa kubatana, uye 24/7 kuwana kune yega nharaunda.
KUKUMBIDZANA VANHU VOKUITA BHUSI KANA KUZorora
Vaenzi vanokwanisa kuwana nzvimbo dzakasiyana siyana dzekuzorora pahotera kusanganisira dziva rekunze rinotarisana neGungwa Dzvuku uko vashanyi vanogona kuzorora nekudya kuresitorendi yegungwa, Khamsin Pool Bar. Iyo yega hotera pamhenderekedzo yegungwa inzvimbo yakasarudzika yekuitira pakavanzika kuungana, mabharuki pakunyura kwezuva uye kunakidzwa nemabasa emvura senge kayaking uye paddleboarding. Crystal Lounge inzvimbo yaunofarira nharaunda yemuno uye inopa sarudzo yezvinwiwa, chikafu chisina kujeka uye varaidzo manheru.
Sheraton Djibouti ine 327 mativi emamirimita ezviitiko nzvimbo, inosanganisira matatu makamuri emusangano uye bhajiro ichangobva kugadziridzwa iyo inogona kutora vashanyi zana nemakumi masere. Musangano wehunyanzvi wehotera uye nyanzvi dzezviitiko zvinopa hunyanzvi hwese hunodiwa uye rubatsiro rwekuungana kwakabudirira kubva pamisangano yepedyo yeboka kusvika kumhemberero huru dzemuchato.
"Tinofara kugamuchira vafambi vepasi rose nevagari vemunharaunda zvakafanana kuti vawane nzvimbo nyowani uye dzinokurudzira paSheraton Djibouti," akadaro Boumediene Ouadjed, General Manager kuSheraton Djibouti, "Djibouti ine zvakawanda zvekupa nekuwana pamwe nemusanganiswa wayo weclectic wekare uye mutsva. . Nzvimbo dzayo dzakasiyana-siyana dzinosanganisira madziva emunyu, mapani akanyura uye makoronga ane matombo, zvinoita kuti ive nzvimbo yakanaka kune vanoda zvisikwa. ”
Kuti uwane mamwe mashoko, tapota shanya www.svandvdale.com.br